ကြောက်စရာအချိန်ရှိရန် ၁၅ Halloween လက်မှုပညာ | လက်မှုပညာများဖွင့်ထားသည်
ပျော်ရွှင်စရာအချိန်များကိုပိုင်ဆိုင်ရန် Halloween လက်မှုပညာ ၁၅ ခု
Isabel ကာတာလနျ | 14/10/2021 18:00 | ဟယ်လိုလက်မှုပညာ, ကလေးများအတွက်လက်မှုပညာများ
Halloween နီးလာပြီဆိုတော့စတိုင်လ်ဆင်နွဲဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ။ တစ်ချို့ကိုအခွင့်အရေးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဟယ်လိုလက်မှုပညာ supergirls များသည်အိမ်ကိုအလှဆင်။ ပျော်ရွှင်စရာအချိန်ကိုပိုင်ဆိုင်လိုပါသလား။ ဤပို့စ်တွင်ဤအားလပ်ရက်များကိုပြုလုပ်ရန်မူရင်းအကျဆုံးလက်မှုပညာအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ လက်လွတ်မနေပါနဲ့!
1 Bat clip နှင့်ယခုနှစ် Halloween ပွဲအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာများ
2 စုန်းမသည်အိပ်ယာခင်းပေါ်လွယ်လွယ်ကူကူဟယ်လို ၀ င်လည်သောလက်ရာဖြစ်သည်
6 ဟယ်လိုဝင်းအဘို့အနက်ရောင်ကတ်ထူပြား mummy
8 ဟယ်လိုဝိန်းပွဲမှာသကြားလုံးပေးဖို့အတွက် Monster pack
9 ကလေးများနှင့်အတူလုပ်လွယ်ကူသောဟယ်လိုဝင်း mummy
10 mummy ၏သွင်ပြင်၌ဟယ်လိုဖယောင်းတိုင်ကိုင်ဆောင်သူ
11 ဟယ်လိုဝင်းအတွက်ရယ်စရာ lolly တုတ်
13 ချစ်စရာကောင်းတဲ့ cardboard bat
15 ဟယ်လိုအတွက်နည်းနည်းစုန်း ဦး ထုပ်
Bat clip နှင့်ယခုနှစ် Halloween ပွဲအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာများ
ငါတို့ဒီကနေစပါ bat ကုပ်သစ်သားအ ၀ တ်များ၊ အနက်ရောင်အမှတ်အသားများ၊ အနက်ရောင်ကတ်ထူပြား၊ ကတ်ကြေး၊ မျက်လုံးများနှင့်လက်လုပ်ဆီလီကွန်ကဲ့သို့အိမ်တွင်သင်ရှိပြီးသားပစ္စည်းများနှင့်အမြန်ပြင်ဆင်နိုင်သောအရိုးရှင်းဆုံး Halloween လက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အခြားအသုံး ၀ င်မှုများစွာကြားတွင်အိမ်၏ကုလားကာများကိုဆွဲထားရန်၊ အဝတ်စများပေါ်တွင်ဆွဲထားရန်သို့မဟုတ်မှတ်စုစာအုပ်အလှဆင်ရန်ဤ bat clip ကိုသင်သုံးနိုင်သည်။ ပို့စ်ထဲမှာ ဟယ်လိုဆင်နွှဲရန်လင်းနို့ညှပ်နှင့်အခြားရွေးစရာများ ဤနှစ်တွင်၎င်းတို့ကိုပြုလုပ်ရန်ညွှန်ကြားချက်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
စုန်းမသည်အိပ်ယာခင်းပေါ်လွယ်လွယ်ကူကူဟယ်လို ၀ င်လည်သောလက်ရာဖြစ်သည်
စုန်းမတစ် ဦး သည် Halloween ပွဲတော်နှင့်အဆက်စပ်ဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤစာရင်းမှမပျောက်နိုင်ပါ။ မင်းကဒီရာသီကိုပြင်ဆင်နိုင်ပြီးမင်းအိမ်မှာဧည့်ခံပွဲလုပ်ရင်မင်းဧည့်သည်တွေကိုအံ့သြသွားစေနိုင်တဲ့ရယ်စရာအကောင်းဆုံး Halloween လက်မှုပညာတွေထဲကငါယူလာပေးတယ်။ ပြောချင်တာကဒီရယ်စရာပါ ကြေမွနေသောစုန်းပုံသဏ္ာန်အိပ်ယာခင်းအိမ်တွင်ပြုလုပ်ရန်အရိုးရှင်းဆုံးလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဖိနပ်နှင့်ခြေအိတ်တစ်စုံ၊ ကူရှင်ထည့်ရန်နှင့်အိပ်ယာခင်းတစ်ခုသာလိုအပ်လိမ့်မည်။ အဲဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ဒီပိုစ့်ကိုဖတ်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ် စုန်းမကိုအိပ်ယာခင်းပေါ်ကြေမွလိုက်သည် အဆင့်တစ်ဆင့်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဤအရေးကြီးနေ့ကိုကျင်းပရန်အိမ်တွင်မပျောက်နိုင်သောအခြားအဆင်တန်ဆာမှာစုန်းမ၏တံမြက်စည်းဖြစ်သည်။ မင်းအိမ်အလှဆင်တာနဲ့မတူတဲ့ထိတွေ့မှုလိုချင်ရင်မင်းဒါကိုပြန်ဖန်တီးဖို့ငါအကြံပြုတယ် စုန်းမရဲ့တံမြက်စည်း ၎င်းအတွက်သင်များစွာသောပစ္စည်းများမလိုအပ်ပါ။ အမှန်တော့မင်းလုပ်ရမှာကသူတို့အားလုံးကိုချည်ဖို့အကိုင်းအခက်အနည်းငယ်နဲ့ဖဲကြိုးအချို့ကိုယူပါ။ လွယ်ပါတယ်!
သို့သော်မည်သို့အသေးစိတ်လုပ်ဆောင်သည်ကိုသင်ကြည့်လိုလျှင်ကျွန်ုပ်ပို့စ်ကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပေးသည် စုန်းမရဲ့တံမြက်စည်းကို Halloween မှာအလှဆင်ဖို့.
စုန်းမတွေရဲ့အကြိုက်ဆုံးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုဒီ Halloween လက်မှုစာရင်းမှာမပျောက်နိုင်ပါဘူး။ ၎င်းသည်ဂန္ထဝင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကလေးများသည်ဤအိမ်ကိုအလှဆင်ရာတွင်ပါဝင်ခြင်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည် ကြောင်နက် သူတို့အခန်းထဲမှာနေရာထားနိုင်တယ်။ ၎င်းကို jiffy ဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးအလွန်လွယ်ကူသည်။ ထို့ပြင်၎င်းသည်ယခင်လက်မှု၌သင်ပြခဲ့သောတံမြက်စည်းဘေးတွင်အလွန်ကောင်းစွာတွေ့ရသည်။
ပစ္စည်းများအနေဖြင့်သင်နှစ်သက်သောအနက်ရောင်ကတ်ထူပြားနှင့်သင်နှစ်သက်သောအခြားအရောင်၊ မျက်လုံးများ၊ ကော်နှင့်ကတ်ကြေးတို့ကိုယူရလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုမည်သို့ထုတ်လုပ်သည်ကို post တွင်ကြည့်နိုင်သည် ကတ်ထူပြားနှင့်အတူအနက်ရောင်ကြောင်မရ။ သင်နှစ်သက်လိမ့်မည်။
ကလေးတွေကသကြားလုံးနဲ့ချောကလက်ကြိုက်တယ်။ Halloween သည်သင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုလည်ပတ်စေ။ အပြင်အဆင်များနှင့်အညီသကြားလုံးများပြင်ဆင်ရန်စိတ်ကူးယဉ်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဤသည် vampire look တွေဖြစ်ပါတယ် ချောကလက်အချို့ကိုတင်ပြရန် ကလေးရောလူကြီးရောအံ့သြသွားလိမ့်မယ်။
ဤအရာသည်သင်အတွက်ပစ္စည်းများများစွာလိုအပ်မည်မဟုတ်သော Halloween လက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အနက်ရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်ကဒ်၊ ယာဉ်မျက်လုံး၊ ကော်ချောင်း၊ ချောကလက်ဘားနှင့်ကတ်ကြေးတို့ဖြင့်လုံလောက်လိမ့်မည်။ လွယ်ပါတယ်! အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ပုံကိုကြည့်လိုလျှင်ပို့စ်ကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့် ဟယ်လိုဝင်းဘို့ချောကလက်ထုပ်.
Halloween စတိုင်လ်၏နောက်ထပ်ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုမှာ mummies ဖြစ်သည်။ သင်သည်ဤနှစ်အတွက် Halloween လက်မှုပညာများစွာပြင်ဆင်နေလျှင်ဤအရာသည်သင်၏စာရင်းထဲမှမပျောက်ပျက်သွားနိုင်ပါ။ အဲဒါကတစ်ခု အနက်ရောင်ကတ်ထူပြား mummy ၎င်းကိုလုပ်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအနက်ရောင်ကတ်ထူပြားအနည်းငယ်၊ ခဲတံ၊ ခဲဖျက်၊ အဖြူရောင်သိုးမွေး၊ လက်မှုမျက်လုံး၊ ကော်၊ ကတ်ကြေးနှင့်တိပ်တို့ဖြင့်ပစ္စည်းများစွာမလိုအပ်ပါ။
ဒီလက်မှုပညာရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုအသေးစိတ်သိချင်ရင်ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ကြည့်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ် Halloween အတွက် Black cardboard mummy
သင်ပါတီတစ်ခုပစ်ရန်စီစဉ်ထားသောကြောင့် Halloween လက်မှုပညာကိုသင်ရှာဖွေနေပါကဤပန်းကုံးသည်သင်ကျင်းပမည့်အခန်းကိုအလှဆင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကလေးများအလှဆင်ခြင်းနှင့်ပါတီအလှဆင်ခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
သင်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်မည့်ပစ္စည်းများ ရယ်စရာပန်းကုံး ၎င်းတို့မှာအနက်ရောင်နှင့်လိမ္မော်ရောင်ဆောက်လုပ်ရေးစက္ကူ၊ တိပ်၊ ခဲတံ၊ ကတ်ကြေး၊ ခဲဖျက်နှင့်အဖြူရောင်ကြိုးများဖြစ်သည်။ သင်မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုကြည့်လိုလျှင်ပို့စ်ကိုကလစ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့် ကလေးများနှင့်အတူလုပ်ရန်ဟယ်လိုပန်းကုံး အဲဒီမှာအသေးစိတ်ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တွေ့လိမ့်မယ်။
ဟယ်လိုဝိန်းပွဲမှာသကြားလုံးပေးဖို့အတွက် Monster pack
Halloween party မှာကလေးတွေကိုအံ့အားသင့်စေတဲ့နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့သကြားလုံးပါ ၀ င်တဲ့ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့နဂါးပုံစံပုံအထုပ်ကိုပြုလုပ်ပြီးဖြန့်ဝေခြင်းပါပဲ။ သူတို့ကအဲဒါကိုချစ်လိမ့်မယ်! သူတို့ကသူတို့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုမှာပါ ၀ င်နိုင်ပြီးပါတီအတွင်းမှာကျန်တဲ့ဧည့်သည်တွေကိုသူတို့ကိုပို့နိုင်တယ်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ monster သကြားလုံးထုပ် အိမ်သာသုံးစက္ကူလိပ်မှကတ်ထူစက္ကူ၊ လက်မှုမျက်လုံး၊ အရောင်ဆောက်လုပ်ရေးစက္ကူ၊ ကတ်ကြေးနှင့်ကော်ကော်သေနတ်တို့အနည်းငယ်လိုအပ်သည်။ ပို့စ်တွင်မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုရှာဖွေပါ ဟယ်လိုဝိန်းပွဲမှာသကြားလုံးပေးဖို့အတွက် Monster pack.
ဒီ mummy ဟာ Halloween လက်မှုပညာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးကလေးတွေတောင်သူတို့ဘာသာသူတို့လုပ်နိုင်တယ်။ သူတို့သည်ဤအရာကိုပြုလုပ်ရန်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသောအချိန်ကိုကုန်ဆုံးစေလိမ့်မည် မင်းအခန်းကိုအလှဆင်ဖို့ mummy သို့မဟုတ်အိမ်၏အခြားမည်သည့်ထောင့်
ဤလက်မှုပညာကိုသင်ပြုလုပ်ရန်အိမ်သာသုံးစက္ကူပုံးများ၊ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောမျက်လုံးများ၊ အဖြူရောင်ကြိုးတစ်ချောင်း၊ ကတ်ကြေး၊ ခဲတံနှင့်တိပ်အနည်းငယ်ကဲ့သို့အခြားယခင်လက်မှုပညာများမှသင်အိမ်တွင်ရှိသည့်ပစ္စည်းအချို့ကိုသင်သုံးနိုင်သည်။ မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုကြည့်ရန်ပို့စ်ကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့် ကလေးများနှင့်အတူလုပ်လွယ်ကူသောဟယ်လိုဝင်း mummy.
အိမ်၏အခန်းများကိုအလှဆင်ရန်နှင့်နတ်ဆိုးဆန်သောထိတွေ့မှုပေးရန် mummy ပုံသဏ္န်ဖြင့်ဤအလွန်အေးသောဖယောင်းတိုင်ကိုကိုင်ရန်သင်မည်သို့ထင်သနည်း။
၎င်းသည်ပြင်ဆင်ရန်အလှဆုံးနှင့်ရိုးရှင်းသော Halloween လက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအတွက်ပစ္စည်းများအဖြစ် ဖယောင်းတိုင် ဖန်ခွက်၊ ပတ်တီး၊ ဖယောင်းတိုင်အချို့၊ လက်မှုပညာမျက်လုံးများနှင့်ကော်ပူသေနတ်တစ်လက်ရရှိရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ လွယ်ပါတယ်! ဒီ mummy ကိုဘယ်လိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကြည့်ဖို့ပို့စ်ကိုကြည့်ပါ mummy ၏သွင်ပြင်၌ဟယ်လိုဖယောင်းတိုင်ကိုင်ဆောင်သူ.
ဟယ်လိုဝင်းအတွက်ရယ်စရာ lolly တုတ်
၎င်းသည်ကလေးများနှင့်ပြင်ဆင်ရန်အလွယ်ကူဆုံး Halloween လက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး စွာသူတို့သည် popsicles အနည်းငယ်စားရန်နှင့်ကျန်သောတုတ်များဖြင့်ဤပျော်ရွှင်မှုကိုပြင်ဆင်နိုင်သည် ချစ်စရာနဂါးယာဉ်မရ။ သူတို့သေချာပေါက်ပေါက်ကွဲလိမ့်မယ်။
ဤလက်မှုပြုလုပ်ရန်အခြားပစ္စည်းများမှာမျက်လုံး၊ ကော်၊ ကတ်ကြေး၊ မနာလိုမှု၊ အဖြူရောင်ကြိုး၊ အရောင်အမှတ်အသားများရွေ့လျားခြင်းဖြစ်သည်။ ပို့စ်တွင်မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုသင်ကြည့်နိုင်သည် ဟယ်လိုဝင်းအတွက်ရယ်စရာ lolly တုတ်.
မည်သည့် Halloween party တွင်မဆိုမပျက်နိုင်သောဂန္ထဝင်တစ်ခုသည်အိတ်များဖြစ်သည် ပေါက်ပေါက်ပုံစံမျိုးမရ။ ဤအရာသည်အရိုးစုပုံသဏ္န်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုပြင်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ ဤအတွက်မင်းပေါက်ပေါက်ကိုပွင့်လင်းသောစက္ကူအနည်းငယ်၊ အထုပ်နှင့်ချည်ရန်အမည်းရောင်အမှတ်အသားတစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့်မင်းကအဲဒါကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကြည့်ချင်ရင်ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ဖို့ငါအကြံပေးတယ် ဟယ်လိုဝင်းအဘို့အပေါက်ပေါက်မရ။ သင်သူတို့ကိုအချိန်တိုအတွင်းပြင်ဆင်လိမ့်မည်။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ cardboard bat
အိမ်မှာမင်းမှာကတ်ထူစက္ကူလိပ်ကလေးတစ်အုပ်ရှိရင်မင်းလက်မှုပညာတွေလုပ်ဖို့သူတို့ဆီကအခွင့်ကောင်းယူချင်တယ်၊ ဒါကောင်းတယ် ကတ်ထူပြားရိုက်တံ အိမ်၏အခန်းများကိုအလှဆင်ရန်ကောင်းသည်။ အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အဝါရောင်ဆောက်လုပ်ရေးစက္ကူ၊ ကတ်ကြေး၊ ကော်၊ အမှတ်အသားနှင့်အမှုန့်အနည်းငယ်ကိုသုံးပါ။ ရလဒ်သည်ကြီးလိမ့်မည်။
El ကြောင်နက် ၎င်းသည် Halloween နှင့်အစဉ်အလာသတ်မှတ်ထားသောတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးဤအမျိုးအစားပါတီကိုအလှဆင်ရန်ကစားစရာများစွာပေးသည်။ သင်ဤတိရိစ္ဆာန်များကိုချစ်လျှင်ဤအရာကိုသင်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်သည့်လက်မှုပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လုပ်ရတာအရမ်းမခက်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့အသေးစိတ်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်။
၎င်းကိုဖန်တီးရန်သင်ပစ္စည်းအနည်းငယ် (အရောင်ကတ်ထူပြား၊ အနက်ရောင်ဖောင်တိန်၊ သံလိုက်အိမ်မြှောင်၊ အဖြူရောင်ပိုက်သန့်ရှင်းရေးနှစ်ခု၊ ကတ်ကြေး၊ ခဲတံ၊ အနက်ရောင်အမှတ်အသားစသည်) အနည်းငယ်လိုအပ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သင်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်မင်းအိမ်ကိုကြည့်ကောင်းပြီးတံခါးမှာတောင်အဲဒါကိုအိမ်တိုင်းမှာချိတ်ဆွဲထားနိုင်ပါတယ်။ မင်းဒီကြောင်ကိုဘယ်လိုအဆင့်ဆင့်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့သရုပ်ဖော်ပုံဗီဒီယိုကိုကြည့်ချင်ရင်ဒီပို့စ်ကိုကြည့်ပါ။ ဟယ်လိုများအတွက်ကြောင်.
ဟယ်လိုအတွက်နည်းနည်းစုန်း ဦး ထုပ်
Halloween မှာမင်းစုန်း ဦး ထုပ်ကိုလက်လွတ်ခံလို့မရဘူး။ သင်သည်အခြားအခါသမယများမှသင်သိမ်းဆည်းထားသောပစ္စည်းများဖြင့်အိမ်တွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ဤလက်မှုပညာသည်အလွန်ရိုးရှင်းသောကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ စုန်း ဦး ထုပ် ဖားတစ်ကောင်၏မျက်နှာနှင့်အတူသင်အနည်းငယ်သာလိုပါလိမ့်မည်၊ အနက်ရောင်ကတ်ထူပြား၊ အရောင်မျိုးစုံ၊ အမြှုပ်၊ ခဲတံ၊ ကတ်ကြေး၊ သံလိုက်အိမ်မြှောင်နှင့်အခြားအရာများသာလိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်ဤရယ်စရာစုန်း ဦး ထုပ်ပြုလုပ်ရန်ကျန်ရှိသောပစ္စည်းများနှင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုသင်သိလိုလျှင်ပို့စ်ကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့် ဟယ်လိုအတွက်နည်းနည်းစုန်း ဦး ထုပ်မရ။ ၎င်းသည်ကလေးများအကြိုက်ဆုံး Halloween လက်မှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာ » ကလေးများအတွက်လက်မှုပညာများ » ပျော်ရွှင်စရာအချိန်များကိုပိုင်ဆိုင်ရန် Halloween လက်မှုပညာ ၁၅ ခု